Mkparịta ụka mkparịta ụka ọtụtụ asụsụ maka ụmụ amaala Afrịka, ndị nyocha na ndị na-eme iwu iji nye azịza ọsọ ọsọ gburugburu COVID-19 - AfricaArXiv
bipụtara DialogShift & AfricArXiv on 8th May 2020 8th May 2020
Ihe mmalite German DialogShift na ntụpọ akwụkwọ ntụzịaka pan-African AfricaArXiv zụlite mkparịta ụka mkparịta ụka ọtụtụ asụsụ maka ụmụ amaala Afrịka, ndị nchọpụta na ndị na-eme amụma iji nye azịza ọsọ ọsọ gburugburu COVID-19.
Ọrịa coronavirus ejirila ike dị egwu ju ụwa niile. Ọ na-esiri ọtụtụ ndị ike ịtụle ọnọdụ dị ugbu a na karịa na ha na-echegbu onwe ha gbasara ahụike ha. Ndị ụlọ ọgwụ Berlin Vivantes Emebela chatbot Covid-19 na weebụsaịtị ha na Machị 2020. Chatbot ahụ na-aza ajụjụ 1000 kwa ụbọchị n'ọtụtụ asụsụ (German, Bekee, Turkish, Russian na Arabic) na gburugburu elekere. Ọgụgụ isi, yana ohere nke ịjụ ajụjụ site na nkata, na-aza ajụjụ ndị kachasị mkpa gbasara nje ahụ, na-eme ka ndị ọrịa nwee usoro site na usoro ọkachamara ma na-enye ndụmọdụ ndị akọwapụtara maka ịme ihe.
Ndị na-enyere aka n'ịntanetị dị ka chatbots nwere ikike dị ukwuu, n'ihi na ha dị 24/7 ma zaa ajụjụ ndị bụ isi n'asụsụ dị iche iche na-akpaghị aka. Nyefe ozi dị mfe ma dịkwa ngwa na-enyere ụmụ amaala na ndị ọrịa aka, ọkachasị n'oge ndị a na-ejighị n'aka.
Olga Heuser, Okwu mkparịta ụka CEO
Ekpokọta COVID-19 na-enye ozi ozugbo banyere ọrịa na-ebute ọrịa na mgbaàmà ọfụma yana ebe enwere ike ị nweta ozi ndị ọzọ, ndị tụkwasịrị obi na mpaghara. N'ime usoro otu ọnwa zuru, anyị ga-eleba anya nke ọma ajụjụ ndị ọbịa websaịtị na-ajụ ma ghazie ịzaghachi ya.
Chatbots site na imewe bụ sistemụ ikwu okwu nke na-arụ ọrụ dị ka onye nwere asụsụ asụsụ maka data na ndị na-enye ọrụ. Site na mgbakwunye nke chatbot a na websaịtị AfricaArXiv ndị otu anyị ga-enwe ike ịkwado nke ọma na oge ọfụma na ozi metụtara nyocha sitere n'aka ndị sayensị Africa banyere COVID-19 yana otu esi enyere ha aka na-eme ka nchọpụta nyocha ha dị maka agụmakwụkwọ ụwa. okwu na mkparita uka.
Luke Okelo, Mahadum nka na ụzụ Kenya [ORCID iD]
Site na Nsụgharị Asụsụ Na Ntan (NLP) jiri Google Ntụgharị, chatbot dị na ihe karịrị otu narị asụsụ gụnyere Afrikaans, Arabic, Amarinth, Chichewa, Bekee, French, German, Hausa, Hindi, Igbo, Malagasy, Portuguese, Sesotho, Somali, Sunda , Swahili, Xhosa, Yoruba na Zulu. N'oge usoro mmalite, anyị ga-anwale izizi nke ntụgharị n'asụsụ Africa ma chọọ nzaghachi n'aka ndị ọbịa anyị ka anyị wee nwee ike melite ntụgharị nke asụsụ a na-ejikarị n'ọnọdụ a. Kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọrọ inyere anyị aka ịtinyekwu asụsụ Africa na ndepụta a, ma ọ bụ n'okwu banyere ajụjụ, ajụjụ ma ọ bụ nchegbu.
DialogShiftPlatform AI Platform na-enyere ụlọ ọrụ na ndị otu aka itinye ahụmịhe mkparịta ụka na-ebi ndụ na akpaghị aka gafee ọtụtụ ngwaọrụ ma na-eme ka ndị ahịa ma ọ bụ nkwukọrịta onye ọrụ site na ozi ma ọ bụ nkata (bots) na emetụ emetụ dị iche iche.
AfricaArxiv bu ihe omuma dijitalu nke obodo jiri mee ka ndi nkwurita okwu nyocha nke Africa. Anyị na-ewepụta ikpo okwu na-abụghị uru iji bulite mpempe akwụkwọ, akwụkwọ ndebiri, ihe odide anabatara (post-Mbipụta), ihe ngosi, na setịpụrụ data site na nyiwe ndị otu anyị. Afrịka AAAxxiv raara onwe ya nye ime nnyocha na imekọ ihe ọnụ n'etiti ndị sayensị Africa, kwalite ọhụhụ ụzọ nyocha Africa na ịbawanye mmekorita mba ụwa.